Ubaxii Abaarsadday…!!! W/Q: Mohamed Hassan Daacad | Duul News International
Ubaxii Abaarsadday…!!! W/Q: Mohamed Hassan Daacad	Magaciisu waa Siyaad,waa arday hadda uun dhameeyay Dugsigii sare,waxa uu ku gudo jiraa qal-qaalinta bilaabibadda waxbarasho heer Jaamacaddeed ah iyo baadi goobidda fursad shaqo oo uu nolol-maalmeedkiisa iyo ka Qoyskoodaba ku kaabo.
Intii uu dhigan jiray Dugsiga sare waxa uu ahaa arday ku fiican dhinaca tacliinta,fasalkana wakhtiga Imtixaanaadka waxa uu noqon jiray ardayga gala kaalinta 1-aad ama ta labaad.waxaaba mararka qaar dhici jirtay inuu noqdo Ardayga ugu sareeya guud ahaanba Iskuulka marka lagu dhawaaqayo Imtixaanadka guud ee dhamaadka xili-dugsiyeedka Waxbarasho.
Waxa uu inta badan ahaa arday kali socod ah,waxaana uu u arkayay badsashadda asxaabta badani inay dhaawac ku tahay hamigiisa waxbarasho,waxaana u muuqanaysay in markasta oo uu badiyo la fadhiisiga asxaabta iyo dhalinyaradda ay Ologga-yihiin uu ka lumayo wakhti badan oo uu kaga faa’iidsan lahaa wax-akhris iyo daalacashadda casharo badan oo xidhiidh dadban la leh heerkiisa waxbarasho ee uu ku jiro.
Inta badan wakhtigii waxa uu ku qaadan jiray saddex meelood oo kala ah; Iskuulka,Masaajidka Iyo Gurriga. Waxa intaas u dheerayd mar marka uu fasaxa ka yahay Waxbarashadda oo uu soo booqan jiray Ehelkiisa ay Magaaladda wada degenyihiin,balse ay wakhtiga iyo waayaha noloshu kala irdheeyeen.
Muu ahayn oo kali ah arday ku kooban casharada uu subaxii ugu jarmaado Iskuulka,balse waxa intaas u dheerayd xirfaddo dhawr ah,waxaana uu si weyn u kobciyay heerkiisa ku hadal ee luuqadaha Engilsh-ta iyo Carabiga.waxa kale oo uu lahaa barnaamij jaantus ah,oo muujinaya wax kasta iyo talaabo kasta oo uu qaadi doono Ifasaddii (Cadceedii) kasta ee soo baxda iyo waaggii guduutaba.taas oo door weyn ka ciyaartay inuu horumar la taaban karo ka gaadho qorshayaashiisii mustaqbal ee uu hore u jeexay.
Markii uu ku jiray Galaaska 2-aad ee Dugsiga sare,waxay inta badan Jidka uu Iskuulka usii maro iskaga hor iman jireen Inan (gabadh) iyaduna ardayad ah,balse dhigata Iskuul aan ahayn kan uu Siyaad dhigto. Muddo dheer ayaa jidkaas laysku dhaafi jiray,oo ku siman laba sanno,oo subaxii kastana layska hor iman jiray,layslamana hadli jirin,xattaa salaantu may dhex mari jirin,balse si fiican ayaa laysku waji bartay,waxaana la noqday laba qof oo meel kasta oo ay iskaga soo hor baxaan is-aqoonsadda,is-na muuq garta,balse wax hadal ah aan is dhaafsan.
Siyaad waxa uu dhigan jiray Iskuul ku yaalay Xaafadda ay Sagal degantahay,halka Sagal-na ay dhigan jirtay Iskuul sidoo kale ku yaalay Xaafadda uu Siyaad deganyahay.taas oo keenaysay inay subax kasta Jidka isku sii dhaafaan.
Iyada oo xaal sidaas yahay,ayaa Siyaad waxa uu dhameeyay Iskuulkii,waxaana halkaas kusoo Idlaanaya Xidhiidhkii aan tooska ahayn ee ka dhexeeyay Siyaad Iyo Sagal.Siyaad waxa kusoo fool leh wakhti adag.waxa uu galayaa Imtixaankii dugsiga sare oo ah midhihii iyo aayaha dedaalkii uu kusoo jiray muddo dhawr iyo toban sanno ah uu arday ahaa,waxaana dhinaca kale soo gashay Laydh Jacayl iyo bohol-yaw uu u qaaday inantii Sagal ee ay Jidka isku barteen. Siyaad waa uu fikiray,waxaana uu go’aan ku gaadhay in ‘ Ooddo dhacameed siday u kala sareeyaan,ayaa loo kala guraaye’ uu bal arimaha kala horaysiiyo,isla markaana uu haatan si weyn ugu diyaar garoobo Imtixaanka Shahaadiga ah ee kaabiga kusoo haya,intaas ka dibna uu u hawl-galo sidii uu uga midho-dhalin lahaa Falaadhaha Jacayl ee kaga soo burqanaya inanta Sagal.
Imtixaankii iyo Casuumaddihii kala duwanaa ee ay isku maca-salaamaynayeen Maamulkii,Macalimiintii iyo ardaydii ay mudda goobta waxbarasho ku kulmi jireen waxay ugu soo dhamaadeen jawi degan iyo gabo-bago wanaagsan.
Siyaad isaga oo aan dhinac kale eegin,ayaa waxa uu guntiga u dhixay sidii uu xog buuxda uga soo heli lahaa Inantii Sagal,waxaana uu bilaabay u kuurgal aad u baaladhan oo uu wakhti badan iyo qarash xoog lahiba kaga baxay sidii uu uga gun gaadhi lahaa,isla markaana uu u heli lahaa Macluumaad lagu kalsoon yahay oo raad-raac rasmi ah u ah Sagal. Ugu horaynba,waxa uu badka soo dhigay gurriga ay Sagal gasho iyo halka uu kaga yaalo Magaaladda,Qoyskeeda iyo intay ka kooban yihiin iyo midkastaaba waxa uu ku foogan yahay ee uu qabto,kii waxbarta iyo kii shaqeeyaba,goobaha inta badan Sagal laga helo iyo asxaabteedda gaarka ah ee ay is raacan,wakhtigana inta badana ay wadda qaataan.
Intaas markii uu kasoo faraxashay ninkii Siyaad,ayaa uu arintii balaadhiyay,isla markaana uu ka talo-galiyay asxaabtiisa khusuusiga ah,ee uu talo biddo markay soo gaadho marxaladdan masiiriga ah oo kale. Waxa uu Siyaad si cad ugu bandhigay hawshan culayskeedda leh shaqsiyaad uu kalsooni badan ku tuhmayay,isla markaana si wanaagsan u yaqaanay inanta Sagal iyo Qoyskeedaba.
Dhamaan asxaabtii taladda iyo tashigaba uu bidday waxay ku qal-qaaliyeen in aanu hawshaas u laba gacmoodin oo uu si geesinimo leh ugu dhiiraddo,kana badheeyo dalabkiisa oo uu arinta si toos ah ugu qadimo Sagal hawshan uu wakhtiga badan iyo la-tashiga balaadhan kala yeeshay dhinacyo waayo-aragnimo badan u leh arimaha noocan ah.
Siyaad,ma aha nin khibrad badan u leh hawlaha noocan oo kale ah,isl markaana waa markii ugu horaysay ee uu galo hawl noocan oo kale ah.hore waxa uu iskaga ahaa arday weheshadda Buugaagtiisa,kuna foogan inuu ka shaqeeyo inuu beerto mustqabal ifaya oo berri uu dhiggiisa ku dhaafo,si uu u noqdo qof kaalin muuqata kaga jira Bulshadda uu la nool yahay,isla markaana uu u soo celiyo tacabkii iyo dedaalkii ay Waalid iyo Macalinba u hureen markii uu raad-baradka nolasha ahaa.
Siyaad,markii uu si buuxda ugu qancay talo iyo tusaale waxii ay la wadaageen asxaabtii uu arintan ka talo-galiyay,waxa uu bilaabay sidii uu xidhiidh toos ah ula samayn lahaa inanta Sagal.
Ugu horaynba waxa uu baadi-goobay sidii uu ku heli lahaa telafankeeda gacanta iyo barta ay ku leedahay degelka xidhiidhka Bulshadda ee facebook-ga.ka dib in muddo ah oo uu hawshaas ku dabo-jiray waxa u suura-gashay inuu helo dhamaan ciwaanadda sida joogtada ah looga heli karo Inanta Sagal.
Waa bilawgii bisha barakaysan ee Ramadaan,waxaana xalay uun loo soo sheegay telafankii gacanta ee Sagal,waxaana uu hadda Siyaad ku sugan yahay mid ka mid ah Hoteladda Caanka ee Magaaladda,oo uu hawlo shaqo u joogo.waxa uu go’aan ku gaadhay in saacaddaas uu joogaba uu garaaco telafanka Inanta,isaga oo ka shidaal qaadanaya odhaahda ah; “ Wax la raagsho,rag kuma samro”.
Hadda telafankii ayuu si toos ah u garaacayaa,isaga oo garaaca wadnahiisu tandhaafay,waayo ma garan karo waxa loogu jawaabi doono…
Waa bilay ku diidaa,waa bilaaba ceebi kaa raacdaa, waa bilay….waa bilay………..waa bilay…. Ayay maskaxdiisu leedahay sikanaddan kooban ee uu telafanku dhacayo.hadda waxa uu muraayaddii telafankiisa ka arkayaa caalamad muujinaysa in telafankii laga qabanayo…